7 dhacdo oo muran dhaliyay oo ku saabsanaa jilayaashii 1990-meeyadii - Muraayad
Home Nolosha 7 dhacdo oo muran dhaliyay oo ku saabsanaa jilayaashii 1990-meeyadii
7 dhacdo oo muran dhaliyay oo ku saabsanaa jilayaashii 1990-meeyadii
Sheekooyinkii xanta ahaa ee muranka badan dhaliyay 1990-meeyadii
Karisma Kapoor iyo Akshay Kumar
Wax ka ogoow toddobo arrimood oo muran iyo xan badan ka dhasheen oo hareeyay jilayaashii Hindiya ee 1990-meeyadii.
Dadka caanka ah hadda badankood bannaanka ayey soo dhigaan arrimahooda gaarka ah ee lagu xanto sababtoo ah baraha bulshada ayaan u suuragalineynin in ay wax qariyaan.
Hase yeeshee inteenna badan markii aan soo koreynay 1990-meeyadii, sir badan oo ku saabsan jilayaasha caanka ah looma soo bandhigi jirin dadweynaha, marka laga soo tago xan iyo warar ku tidhi ku teen ah ama qaarkood oo sannado kaddib qiraal sameeyay.
Halkan waxaan idiinku soo gudbineynaa 7 ka mid ah sheekooyinkii hadal-heynta badan dhaliyay sagaashameeyadii.
1- Murankii hareeyay geeridii Divya Bharti
Dhammaanteen waan ka war qabnaa dhimashadii naxdinta lahayd ee Divya Bharti xilligii ay heerka ugu fiican ka joogtay xirfaddeeda jilitaanka.
Sida la sheegay waxay kasoo dhacday hoteel dabaq ahaa oo qeybaha sare ay ka saarneyd.
Waxaa lasoo tabiyay in markii ay dhimatay kaddib uu saaxiibkeedii hore Sajid Nadiadwala si aad ah u niyad jabay oo xitaa uu ku guul darreystay xiriirkii uu damcay inuu la sameeyo atariishada kale ee lagu magacaabo Tabu.
Qalbigiisa waxaa ka bixi weysay Divya. Laakiin arrinta la yaabka leh waxay ahayd markii ay soo baxeen warar la isla dhex marayo oo dheegaya in dhimashadeedii loo maleynayay shilka ay ahayd dil si ula kac ah loogu fuliyay, ama ay iyadu ku talagal isu dishay.
Xanta qaar waxay qeexeysay in dilkeeda ay dambeeyeen atariishooyin ka maseyrsanaa ciyaarteeda fiican iyo xirfaddeeda heerka sare gaartay.
2- Mamta Kulkarni ma waxay filimada uga hartay daroogo darteed?
Mamta Kulkarni waxay ahayd xiddig caan ah sannadihii 1990-meeyadii, mana jirin qof ku fikirayay in ay soo afjari doonto xirfaddeeda cajiibka ah.
Laakiin markii la sheegay in ay xiriir jacayl la yeelatay Vicky Goswami, waxaa lagu soo daray dadka ugu waaweyn ee lagu eedeynayay daroogo qiimaheedu ahaa Rs 2,000 crore.
Xitaa mar waxaa lasoo tabiyay in ay diidday amarka maxkamadda ayna baxsatay. Sanadkii 2018-kii, booliska Thane ayaa sheegay in ay joogto dalka Kenya.
Dhanka kale, qaar badan oo naga mid ah wali waxay ku ciyaarayaan heesteedii caanka ahayd ee ‘Koi jaye toh le Aaye’, waxayna isweydiinayaan halka ay jaan iyo cirib dhigtay.
3- Sourav Ganguly iyo Nagma? Hee maxaa dhacay?
Xilligaas waxaa mar soo baxay sheeko hadal heyn xan ah oo ku saabsaneyd in kabtankii kooxda cricket-ka, Sourav Ganguly uu gogol dhaaf la sameynayay atariishadii caanka ahayd ee magaceedu ahaa Nagma.
Ma ogtahay in Nagma – oo hadda siyaasiyad ah – ay goor dambe wareysi wax badan fashilay siisay wargeyska Savy, iyadoo shaaca ka qaadday in ay ciyaartoygaas kala hareen maadaama arrintooda ay burburineysay xirfaddiisa?
“Wax walboo dadku ay dhahaan, ma jirto cid inkiraad sameysay. Maadaama labada qof midna uusan inkirsaneyn jiritaanka kan kale, qof walba wixii uu doono ha dhoho… xirfad ayaa khatar ku jirtay hal ruux in uu meesha ka baxo ayeyna ahayd, waxaa khasab ahayd in wax la miisaamo intii halis loo bareeri lahaa,” ayey tidhi.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey intaas ku dartay: “Haa Sourav waxaa xilligaas xaaskiisa ahayd Dona, walina wuxuu la joogaa Dona.”
4- Qofkii daba gala qisooyinka jacaylka ee Ajay Devgn, Raveena Tondon iyo Akshay kumar wuu wareerayaa
Horta fariiso oo koob shaah ah shubo, sababtoo ah sheekooyinkan waan ku jah wareeri kartaa, madaxa ayaana kugu xanuuni kara.
Sidan ayey u dhaceysaa sheekada dad badan hadalhayeen sannado, ilaa haddana kuwo kale maskaxdooda ka guuxeysa.
Ajay Devgn wuxuu mar xilliyada ka mid ah “saaxiib fiican” la ahaa Raveena Tondon. Hase yeeshee kaddib wuxuu haddana saaxiib la noqday Karisma Kapoor, sannado kaddibna wuxuu guursaday Kajol.
Haddii aad xasuusatid, Farah Khan ayaa xusay in labada atariisho ay isku dhaceen mar ay filim isla jilayeen xilli uu Farah hagayay qoom ka ciyaar ay sameynayeen.
Markaas kaddib, Raveena waxay xiriir la yeelatay Akshay Kumar, isagiina way kala tageen.
Akshay Kumar ayaa sanadkii 1998-kii yidhi: “Waxa naga burburay wuxuu ahaa faraanti galis uun, iga raali noqo aan ku saxee, waligeen isma guursanin iyada”.
Kaddib Akshay wuxuu la saaxiibay saxaabaddii hore ee Raveena, oo waliba ay aad isugu fiicnaayeen, Shilpa Shetty, arrintaas oo gabi ahaanba fadeexad isu baddashay.
Taasna sidoo kale ma suurtagalin, sababtoo ah Akshay wuxuu ugu dambeyn guursaday Twinkle Khanna, war illeen tanoo kale!
5- Qoraa lagu magacaabo Jessica Hines ayaa sheegtay inay cunug u dhashay Aamir Khan
Haweeneyda wariyaha ah ee u dhalatay Britain, Jessica Hines, iyo Atooraha caanka ah ee Bollywood-ka, Aamir Khan, ayaa la sheegay inay ku kulmeen duubista filimka Ghulam.
Waxaa jirta hadal heyn ku saabsan in markaas kaddib ay yeelatay uurka wiilkooda, Jaan.
Jessica si cad ma aysan u shaacinin wixii dhex maray iyada iyo Aamir, laakiin waxay sheegtay in seygeeda William Talbot uu aad ugu roon yahay wiilkeeda uu adeerka u yahay.
“Waa cunug faraxsan, hadda aabe ayuu ka dhigtaa William, marka wuxuu qof kale u tabayaa?” ayey tidhi.
Aamir wuu beeniyaa xantaas, xilligaasna xaas ayuu lahaa.
6- Sanjay Dutt iyo Madhuri Dixit mar miyey is jeclaayeen?
Kulligeen waan yaabi jirnay markii dadka naga waaweyn ay labadooda isku xaman jireen xilligii ay isla soo jileen filimkii ‘Kalank’.
Qof walba oo hadda loo sheego in Madhuri iyo Sanjay ay xiriir jacayl lahaayeen 1990-meeyadii waxay ku noqotaa layaab.
Lamaanahan ayaa la sheegay in ay xiriir yeesheen kaddib markii xaaskii Sanjay ay geeriyootay.
Hase yeeshee markii Sanjay Dutt lagu helay dambigii loo heystay ee ku saabsanaa arrimaha argagixisada – oo dhammaanteen aan ka wada warqabno – waxaa durbadiiba soo shaac baxay hadalheyn ku aaddan in uu xiriirkooda burburay.
Sidaas darteed qof walba wuu yaabay markii ay sannado badan kaddib isla keeneen filimka jacaylka ah ee Kalank, kaasoo ay ku jireen ficillo badan oo xiiso leh oo labadooda dhex maray.
7- Waxaa jirtay arrin weyn oo ku saabsaneyd Salman Khan, Sangeeta Bijlani iyo Mohammad Azharuddin
Salman wuxuu Sangeeta xiriir jacayl la wadaagay dabayaaqadii 1980-meeyadii iyo horaantii 1990-meeyadii, taasina sir ma aha.
Waxay xitaa damacsanaayeen in ay is guursadaan. Kaddib waxaa soo baxday in Salmaan uu khiyaanay gacalisadiisa, uuna xiriir kale la sameeyay Somy Ali.
Wareysi uu ku bixiyay barnaamijka Coffee with Karan ayuu Salman shaaca uga qaaday inuu mar aad ugu dhawaaday guur. Karan ayaa markaas Salman ku yidhi: “Miyey kugu qabatay?
Isagoo iska dhigaya inuusan ogeyn waxa uu ka hadlayo, ayuu Salman ku jawaabay: “Miyey hee?” Karan ayaa su’aashii ku celiyay kaddibna Salmaan ayaa yidhi: “Xagey igu qabatay?”
Markii uu Karan yidhi ‘Dabcan meel uun’, ayuu Salman markii hore yidhi “Maya, maya, maya, markaasuu intuu sii jeedsaday yidhi: “Haa, wax sidaas u eg.”
Sangeeta horay ayey u socotay oo waxay guursatay ciyaaryahanka crickedt-ka ee lagu magacaabo Mohammad Azharuddin, laakiin markii dambe way kala tageen markii lagu xantay inuu xiriir la leeyahay xiddigta dhinaca ciyaaraha ee Jwala Gutta.
Maanta, Salman Khan iyo Sangeeta labaduba waa iskaabulo.
Previous article6 arrin oo dadka taajiriinta ah ay sameeyaan balse faqiiriinta aysan sameynin
Next articleWadnahaaga halis ayuu ku jiraa haddii arrintan aadan ku sameen karin 90 il biriqsi